पदयात्रीसँग जथाभावी शुल्क लिने कार्य नसच्चाए आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीहरुको चेतावनी
पछिल्लो केहीबर्षयता हिमाली पदयात्राका क्रममा टुरिष्ट तथा ट्रेकिङ गाईडहरुलाई सगरमाथा आधारशिबिर क्षेत्रमा पर्ने सगरमाथा राष्ट्रीय निकुञ्जमा प्रवेश गर्दा परिचय पत्रको नाममा जथाभावी शुल्क उठाएको भन्दै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले बिरोध गरेका छन ।
पर्यटन ट्रेकिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी तथा गाईडहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वबापतको रकम स्वतः राज्यको खातामा जम्मा हुने ट्याक्स प्रणाली बिगतदेखी नै रहिरहेको र सोबापतको रकम व्यवसायी र मजदुरले आफ्नो तलबबाट काटेर पारिश्रमिक लिने बजारीकरणको नियम हो । यद्यपी यि सबै नजिरलाई कुल्चेर सरकारले सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधारशिबिर अन्र्तगतको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्दा गाईडबाट १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्कका रुपमा लिदै आएको छ । जसको व्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका छन ।
१. कर्ण लामा( टान पूर्व महासचिव)
५७ दिने आन्दोलन सम्झाउन नपरोस ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्र मुलुकको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा रुपमा व्याख्या गरिराख्ने तर बिभेदकारी निति थोपरिहने बिगतदेखीको प्रवृत्ति अझै उस्तै छ । २० लाख पर्यटक भित्राउन भनेर भ्रमण बर्षको आयोजना गर्ने तर तिनै पर्यटकलाई मार्गनिर्देशन गर्ने गाईडहरुलाई शुल्कबोझ थोपरेर नैराश्य तुल्याउने सरकारको कार्यशैली बिरोधाभाषपुर्ण छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभ कर श्रमिकको रोजगारबाट ट्याक्स काटेर व्यवसायीले बुझाएकै हुन्छ । यी कुरालाई बिर्सेर पटके कर आतंक हो, यसलाई बन्द गरिनुपर्छ । यदी हस्तक्षेप रहिरहन्छ भने बिगतमा पर्यटन बोर्डमा भ्रष्ट्रचार र अनियमिततामा ५७ दिनसम्म आन्दोलन गरेर ठिक ठाँउमा ल्याएको सन्दर्भ हामी सबैसामु छर्लगं छ । हामी चाहन्छौ की त्यस्तै प्रबृत्तिको कठोर कदम चाल्न नपरोस ।
२. नवराज दाहाल,
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न जाने क्रममा पथप्रर्दशक सँग परिचय पत्रका नाममा पैसा उठाउने काम अनैतिक छ । तालिम लिएका पथप्रदर्शकहरुलाई पैसा लिएर परिचय पत्र दिने जुन कुरा आएको छ, त्यो हैसियत उनीहरुलाई कसले दियो, यसको स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ । पथप्रर्दशक बन्न यसका आफ्नै योग्यता र संम्बन्धीत संस्थामा गएर ट्रेनिङ पछि लाईसेन्स परिचयपत्र पाउने व्यवस्था छ । यस्तोमा कही कतै घुम्न जाँदा कही क्षेत्रबिषेशले परिचय पत्र दिने के जरुरी परयो, बुझ्न गाह्रो भो । यसले पथप्रर्दशक क्षेत्र बिकृत बन्ने खतरा छँदै छ, पर्यटकलाई महंगो प्याकेज भिडाएर अर्को चोटी नआउने स्थीति श्रृजना गर्न खोजिएको छ । यसरी भ्रमण बर्ष सफल पनि हुँदैन । सरकार सच्चियोस । बनमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछौ, कुरा राख्छौ । केही दिनमा व्यवसायीको भेला बोलाएर आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल हुन्छ, टान कार्यसमिती यस्तो केटाकेटीपनको घोर बिरोध गर्दछ ।